Ngaba uTorrent kunye nendlela yokuyisebenzisa | Iindaba zeGajethi
UJose Rubio | | ngokubanzi
Oko i-intanethi yafika emakhayeni ethu, amathuba okufikelela kumxholo ongapheliyo kwiwebhu andile ngokubonakalayo. Malunga neminyaka elishumi eyadlulayo, safumanisa ukuba akunakwenzeka ukulawula ikhompyuter ekwelinye icala lomhlaba ukude kwisofa yethu, enomgangatho owaneleyo wokusebenza kakuhle kwaye ngaphandle kweziphazamiso. Kwaye namhlanje, ngekhompyuter kunye nokunxibelelana kwe-intanethi sinokwenza okungacingekiyo.
Ewe, zininzi iindlela zokwabelana ngeefayile, kodwa namhlanje siza kuxhomekeka kwisikhukula. Inkqubo ye- entlanjeni luhlobo nje p2p ukhuphelo, okanye yintoni efanayo, peer to peer. Oku, kulwimi lweCervantes akuthethi ngaphezulu kwe yabelana ngeefayile phakathi koomatshini ababini okanye abasebenzisi. Kwaye oyena mphathi womlambo uthandwa kakhulu uTorrent, esiza kuthetha ngayo namhlanje. Iya kusivumela share iifayile, kunye nokukhuphela kunye nokuvumela abanye ukuba bakhuphele oko sikufunayo. Qhubeka ufunda kwaye ungalahli naziphi na iinkcukacha ukuze ufumane okungcono kwesi sixhobo siluncedo.
Into yokuqala ekufuneka uyikhumbule kukuba iTorrent iyafumaneka kuzo zombini iMac kunye nePC kunye neLinux. Kuya kufuneka singene kwifayile yakho website esemthethweni kwaye ucinezele iqhosha eliluhlaza esiza kulibona emehlweni ukulikhuphela. Inkqubo iya kuqala ngokuzenzekelayo, ikhuphele isifaki esifanelekileyo senkqubo yethu yokusebenza. Nje ukuba sikhutshelwe, kuya kufuneka silandele amanyathelo aboniswe ngumfaki ngokwawo ukuze, ekugqibeleni, uTorrent sele eqhuba kumatshini wethu.
Xa uvula inkqubo okokuqala, kwifayile yakho ye- isikrini esikhulu siza kubona izahlulo ezintathu ezahlulwe ngokucacileyo. Eyona ibalulekileyo yile indawo yokukhuphela, apho siza kuba nolwazi olwahlukeneyo malunga nokukhuphela nganye esiqhubeka nayo, njengoko siza kubona kamva. Kwicala lasekhohlo siya kuba nefayile ye- indawo esecaleni, apho sinokukhetha khona ukuba zeziphi iifayile esizibona kwiscreen ngokusekwe kwimeko yabo: ukukhuphela, ukugqitywa, ukusebenza, ukungasebenzi okanye konke. Emazantsi kwesikrini siya kuba nefayile ye- ipaneli yolwazi ngeethebhu ezininzi, apho sinokukhetha khona ulwazi olunjenge layisha kwaye ukhuphele isantya ngexesha langempela ngokucacileyo, Iinkcukacha zajikelele malunga nefayile ekubhekiswa kuyo, i iifolda eyakhiwe ngayo, njalo njalo.
Kubaluleke kakhulu xa inkqubo ifakiwe kwaye ngaphambi kokuba uqale ukuyisebenzisa, ukuba senze uqwalaselo oluchanekileyo efanayo. Ke, amava omsebenzisi aya konelisa ngakumbi, ukufumana isantya sokukhutshelwa kunye nawo wonke umxholo wethu ucwangciswe ngakumbi. Bazi imizuzu emihlanu kufanelekile ukutyala imali kolu luhlu lwezinto esizichaza apha ngezantsi.
Kwicandelo jikelele kwimenyu yokukhetha, siya kuba nayo iindlela ezahlukeneyo inokuchazwa yodwa. Khetha njenge ukuqala ngokuzenzekelayo kwesicelo xa silayita izixhobo zethu, buza ngaphambi kokuba uhambe, qala ukhuphelo ngokuzenzekelayo okanye ulwimi, umzekelo. Ngamafutshane, i useto olusisiseko yokusetyenziswa kwenkqubo esivumayo.
Olunye lolona khetho lubalulekileyo ekusebenzeni kakuhle kweTorrent yile ukucwangciswa kwebhanwidth. Ngokwesiqhelo uTorrent uyayilawula ngokuzenzekelayo (kunye nebhokisi yokuqala ekhangelwe), kodwa sinokugqiba isigqibo ngesandla. Ewe ukuba awufuni ukhuphelo lomsinga lwenziwe ngalo lonke ibhendi yenethiwekhi yakho, okanye kuba ufuna ukuyikhawulela ukuze ingagqithi kwinani elithile, ungahlengahlengisa ixabiso ngalinye ngesandla, kokubini kukhuphelo kunye nokulayisha. Ukuba unayo inqanaba le-intanethi ngesixa esithile sedatha ethintelweyo, kukho ukhetho olubiziweyo umda umda, apho unako qwalasela inani ledatha ukuba uvumela inkqubo ukuba yabelane, nokuba phezulu okanye ezantsi, ngexesha elinikiweyo.
Kwaye okokugqibela, amandla oqwalaselo anokukunceda kakhulu xa ulawula ukhuphelo kunye neTorrent umprofeti. Kwithebhu enegama lakhe, kuya kufuneka uyenze khangela ibhokisi kwaye emva koko unokuyilungisa ngendlela othanda ngayo. Iseli nganye iyahambelana Uluhlu lweyure enye ngosuku ngalunye lweveki, kwaye ikhowudi ebhalwe ngombala ngeendlela ezine ezahlukeneyo: mda, umda usebenze, kuphela imbewu kunye nenkqubo engasebenzi. Ngale nto unako qwalasela inkqubo yenkqubo kuxhomekeka kumthwalo oqhele ukwenziwa kwinethiwekhi yakho yasekhaya, ukuvumela ukuba ngelixa usebenza nekhompyuter iTorrent ingagqithi kumda obekwe nguwe emazantsi kwesikrini, ngelixa iiyure zokusetyenziswa kwenethiwekhi encinci, unesantya esingenamkhawulo. Ukuba olu khetho alonelanga kuwe kwaye isantya sakho senethiwekhi siyacotha, khumbula ezi amaqhinga okuphucula isantya senethiwekhi yakho yeWiFi.
Nje ukuba isicelo siqwalaselwe, lixesha lokuqala ukhuphelo. Ukuze ukwazi ukukhuphela ngeTorrent, Kuya kufuneka kuqala sibe nefayile ye wento esifuna ukuyikhuphela. Le fayile ngolwandiso lwezifundo ayikho enye into ngaphandle kwe- uxwebhu oluncinci ethi, xa ivulwa ngeTorrent, inika ulwazi olusisiseko wento esifuna ukuyifumana, nalapho kufanele uyikhuphele Singafumana kuyo yonke inethiwekhi, kwiphepha eliqhelekileyo "lomculo kunye nokukhuphela imovie". Kule posi asizukuchaza naliphi na igama, njengoko ziphantsi kotshintsho rhoqo, kwaye mhlawumbi ethubeni, azisayi kubakho.
Kodwa inye kuphela eyaneleyo ukukhangela okuncinci kuGoogle Ukubhala into esifuna ukuyikhuphela kunye nefani «torrent» kwaye akuyi kuba lula kuthi ukuyifumana. Kufuneka nje khuphela ifayile ekwandisiweyo kwaye xa uyivula uTorrent uya kuyikhathalela eseleyo.
Nje ukuba ivulwe ngeTorrent, iya kubonakala kwifayile ye- khuphela isikrini. Idatha ebalulekileyo ekufuneka ithathelwe ingqalelo yile:
El -nombre lefayile esiyikhuphelayo
Ibha inkqubela phambili yokukhutshwa, njengepesenti
El be yokukhuphela, njengoko kuya kubakho iifayile ezingasebenziyo kangangexesha elithile
La speed kulayishwa kunye nokwehliswa, ebekwe kwi "Isantya" isithuba sephaneli esezantsi.
Ngale datha sinako esweni ngexesha lenene imeko yokukhuphela kwethu. Nje ukuba ibar yenkqubela phambili igqityiwe kwaye ifike kwi-100%, iya kubonisa ukuba ukukhuphela kwethu kugqityiwe, ke siza kuba nefayile kwifolda esiyibonise njengendawo ekuyiwa kuyo kukhetho lweTorrent. Kufuneka siyivule ngenkqubo ehambelana nayo kwaye siyonwabele kwikhompyuter yethu.
Ukuba ukhetha ukusebenzisa ezinye iindlela ze-P2P, ungaphoswa leli nqaku iiseva zeMule onokuzikhuphelela ngayo ngokulula iifayile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Yintoni iTorrent kunye nendlela yokuyisebenzisa
Thatha ithuba lesaphulelo kwiimveliso zeKoogeek kwiAmazon